Na-ebi Ndụ - NYE Countdown.com
Hụ otu ụfọdụ ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile si eji Ngụpụta NYE! Nke a bụ elu elu sinik nke ọ na-ebi ndụ!
Kee nke gị! Pịa ebe a iji tinye!
Dabere na 34 nyocha
Kpamkpam kediegwu! Site na nrụpụta ọdịyo na vidiyo zuru oke na-esochi yana ọrụ ndị ahịa mgbe ire ya dị... na-atọ ụtọ. Dịka DJ nwere oge, ọ pụtara ụwa nwere NYECOUNTDOWN.com dịka akụ nke m ga-aga.GỤKWUO
Ngụgụ NYE dị egwu !!!! Ọrụ ha na mma ha nọ n’ụwa a. Ha na-enyere aka ma nke ukwuu... ọkachamara na ngwa ngwa. M ga-emekwu azụmahịa karịa ha .... Nọgide na-ahụ NYEGỤKWUO
Ezigbo mma ọrụ !! Ọrụ Ndị Ahịa Elu. Nkwukọrịta Ezigbo. Mmekọrịta kachasị mma. Ga-alaghachikwute ha maka... ọzọ Dj dara / Ids (Intros).GỤKWUO
23:59 27 Mee 20
Ezigbo nnyefe ngwa ngwa, yana ọrụ aka mere ka ọdalata. Aga m achọ ihe ndị ọzọ. Nnukwu ọrụ ụmụ nwoke.
11:33 27 Mee 20
Oge nzaghachi dị ngwa ngwa. Ọrụ ndị ahịa ahụ enweghị atụ na Drop m zuru oke. Ha n'ezie nwere a... ndị ahịa ọhụrụ n'ime m.GỤKWUO
18:33 15 Mee 20
Magburu onwe ya dara ada. nkwukọrịta dị egwu na ọrụ ndị ahịa. Ha na - ege ntị ma ghọta ihe ịchọrọ ma dịkwa... na-achọ, dịka DJ amataghị ebe m ga-enweta mmiri, mana amatala m ebe m ga-aga site ugbu a gaa n'ihu. Daalụ.GỤKWUO
17:29 11 Mee 20
M nyere iwu 4 tụlee ha na-anụ ọkụ n'obi! Jasmin nwere ọ aụ dị ukwuu ịrụ ọrụ na ya. Ọ hụrụ na enwetara m nke m... chọrọ / chọrọ. Daalụ, Jasmin!GỤKWUO
03:32 09 Mee 20
Kpamkpam ọrụ klas nke mbụ ... nyere m iwu ka m jingles ma nwee ya n'ime elekere iri abụọ na anọ… Meere Storm na Jasmin niile... ndi otu… 👍🙂GỤKWUO
Ihe Ntuta DJ
Na Na Na Na Naa (Bundled Paks)
Ngwa Ndị Ọhụrụ